Saxatoo pikselii soofuuf qaaqa banaa. Dalagaan kan argamu yoo saxatoon pixselii mallattaa'e dha. Soofuu dandeessisuuf fakkiin dirqama filamuu qaba.
Toleessaa fi Fakkasaa keessatti yeroo sajoo cuqaastu qaaqan hin argamu, garuu soofuu sadeti qabaman arguu dandeessa. Baafata halqara fakkaattii filamee banuudhaan Fakkaattii Soofuu fili, yoo soofuuf Qaaqa gargaaramuu barbaadda ta'e.
Fakkaattii soofuuf qabanoo soofuu sadeti kamiyyuu harkisi.